Mpanamboatra boaty fibre karbaona automobile tsara indrindra sy mpanamboatra | Wanhoo
Mavesatra maivana, henjana avo
Ireo fiara mandeha herinaratra miaraka amin'ny fihenan'ny lanjany 100 kg dia afaka mamonjy manodidina ny 4% ny angovo mitondra fiara. Noho izany, ny firafitry ny maivana dia mazava ho azy fa manampy amin'ny fampitomboana ny sehatra. Raha tsy izany, ny lanjan'ny maivana miaraka amina ambaratonga mitovy dia mamela hametrahana bateria kely sy maivana kokoa, izay mamonjy ny vidiny, mampihena ny toerana fametrahana ary mampihena ny fotoana famerana. Ohatra, ny mpahay siansa ao amin'ny University of Applied Technology any Munich dia mino fa ity miniaturization ity dia afaka mampihena ny lanjan'ny 100 kg, amin'izay hampihena ny vidin'ny bateria hatramin'ny 5 isan-jato. Ho fanampin'izany, ny lanjan'ny maivana dia manampy amin'ny fanetsehana ny dinamika ary mampihena ny habeny sy ny anaovany freins sy chassis.
Hamafiso ny fiarovana afo
Ny fitarihana hafanan'ny fitambaran'ny fibre karbonika dia manodidina ny 200 heny ambany noho ny an'ny aliminioma, izay fepetra mialoha hisorohana ny bateria tsy handrehitra ireo fiara elektrika. Azo hatsaraina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanampiana fanampiny. Ohatra, ny fitsapana natao anay dia mampiseho fa ny fiainana mitambatra dia avo efatra heny noho ny vy na dia tsy misy mika aza. Manome fotoana betsaka an'ireo mpiasa an-tsambo hamonjy amin'ny fotoana ilana vonjy maika.
Hatsarao ny fitantanana hafanana
Noho ny tsy fitovian'ny hafanana ambany amin'ny fitambarana, ny fitaovana dia manome anjara biriky lehibe amin'ny fanatsarana ny fitantanana hafanana. Ny bateria dia arovana ho azy avy amin'ny hafanana sy ny hatsiaka amin'ny alàlan'ny akora fametahana. Amin'ny alàlan'ny famolavolana mety dia tsy ilaina ny insulation fanampiny.
Fanoherana ny harafesina
Ny fitambaran'ny fibre karbaona dia tsy mila manana arofanina hafa toy ny vy. Ireo fitaovana ireo dia tsy mora harafesina ary tsy hivoaka ny fahamendrehan'ny rafitra na dia simba aza ilay ambany.
Famokarana faobe ny kalitaon'ny fiara sy ny habetsany
Ny ambany sy ny fonony dia faritra fisaka, izay azo hamokarana betsaka ary miorina amin'ny fomba fitehirizana fitaovana. Na izany aza, ny firafitry ny rafitra dia azo atao amin'ny fitaovana mitambatra amin'ny alàlan'ny fizotry ny famokarana vaovao. angamba
Sarany fananganana jiro manintona
Amin'ny famakafakana totalin'ny vidiny, ny boaty bateria vita amin'ny vatan'ny fibre karbonika dia mety hahatratra ny haavon'ny vidiny mitovy amin'ny aliminioma sy vy amin'ny ho avy noho ny tombony maro.
Ankoatr'izay, ny fitaovantsika dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny vatan'ny bateria, toy ny mifanentana elektromagnetika (EMC), ny rano ary ny tery.
Teo aloha: Carbon fibre UAV Rack-Hydrogen Energy
Manaraka: Tabilao fibre karbaona mahatohitra hafanana avo